Mogadishu Journal » 2021 » June » 6
(Xilka iyo xubiga kala dooro!) Qiso dhab ah oo qabsatay Taliye ku-xigeenka Booliska Somalia
Wiil aan asxaabo dhow nahay ayaa maalin igu yiri saaxiibeey ragg badan oo gayaankaaga ah baa guur ku soo bandhigtayee maa iska aroostid? Waxaan dhahay inta aan xilkaan haaya ma aroosi karo. Waxuu yiri maa xeerka boliiska sidaa qaba mise waa jeebkaada? Waana buufis badan tahayee...
Maxkamadda Ciidamada Qalabka sida ee Somalia ayaa maanta dhegeysatay Ganacsato ku eedeysan inay dalka soo gelin jireen Kiimikada iyo Agabyada loo adeegsado waxyaabaha qarxa, ayna u gudbin jireen Alshabaab. Ganacsatadan ayaa gaaraya todoba xubnood ayaa waxaa maxkamadda ka maqnaa...
DEG DEG: Nin Maalmo ka hor xaaskiisa ku dilay Muqdisho oo gacanta lagu dhigay
Taliska ciidanka Booliska Somalia ayaa goor dhow shaaciyey in gacanta lagu soo dhigay Nin maalmo ka hor xaaskiisa ku dilay degmada warta Nabada ee magaalada Muqdisho “Ciidanka Boliiska Soomaaliyeed, ayaa hada gacanta ku haya eedeysane Bashiir Cabdi Xasan, oo horay xaaskiisii...
Khilaaf xoogan oo soo kala dhax galay dowladda Nigeria iyo shirkadda Twitter
Malaayiin Nigerian ah ayaa Sabtidii awoodi waayey inay adeegsadaan twitter kadib markii ay dowladda dhaqan-gelisay go’aan ay ku xanibtay howlgalladii shabakaddan ee dalka Nigeria, taasi oo socon doonta muddo aan cayimneyn. Ururka Shirkadaha Isgaarsiinta Nigeria ee loo soo gaabiyo...
Dowladda Qatar ayaa u cambaareysey weerar is-miidaamin ah oo shalay ka dhacay goob baabuurta rakaabka laga raaco oo ku taalla magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. War-saxaafadeed ay maanta soo saartay wasaaradda arrimaha dibedda Qatar, oo ay baahisay wakaaladda wararka...
Wareegto kasoo baxday Xafiiska Ra’isul Wasaaraha Xukuumada federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa xilka looga qaaday agaasimayaasha guud ee Wasaaradaha Warfaafinta iyo arimaha gudaha. Ra’isul Wasaare Rooble ayaana u magacaabay agaasimaha guud ee Wasaarada Warfaafinta...
Xanta Waxay Leedahay: Sancho wuxuu ogolaaday shuruudaha heshiiska Man Utd
Borussia Dortmund ayaa u muuqata inay diyaar u tahay inay u ogolaato Jadon Sancho inuu baxo xagaagan. Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka England ayaa waxaa dooneynayay kooxo dhowr ah oo Premier League ah horay. Wuxuu ku dhawaaday inuu ku biiro Manchester United 12 bilood ka...
Palestinian activist behind social media campaign against forced expulsions in Sheikh Jarrah taken to police station after raid on home. 6 Jun 2021 Israeli police have detained activist Muna al-Kurd, who has been at the forefront of the campaign to stop the forced expulsions of...
Xisbiyada Mucaaradka Somaliland ee Wadani iyo UCID ayaa maanta sameestay isbaheysi cusub oo ka dhan ah xisbiga talada Somaliland haya ee Kulmiye, xili labadan xisbi doorashooyinkii dhacay kuraas badan ku guuleesteen. Kulan ay maanta yeesheen hogaanka Xisbiyada Wadani iyo UCID...
Golaha Midowga Musharaxiinta Madaxweynaha Soomaaliya qaarkood ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay qaar kamid ah xubnihii ay cabashada ka gudbiyeen ee laga saaray guddiyada doorashada iyo xalinta khilaafaadka. Musharax Madaxweyne Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa soo dhaweey...
Gaadiidka Dhismaha iyo Injineero u dhashay dalka Masar oo gaaray Gaza (Daawo Sawirro)
Dhulka Falastiin waxaa gaaray Gaadiidka waa weyn ee Cagafcagafyada iyo gaadiid kale oo nuuca dhismaha ah oo dowlada Masar u dirtay Marinka Gaza , si ay gacan uga haystaan Dib-u-dhiska dhismooyinkii ku burburay dagaalkii u dhaxeeyay Israa’iil iyo Xamaas.Waxaa sidoo magaalada Gaza...